Tuhun Sharaf Dhac oo Qudha looga Jaray Gabar - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Tuhun Sharaf Dhac oo Qudha looga Jaray Gabar
La daabacay onsdag 25 april 2012 kl 11.25
Gabadh horay sharaf-dhac loogu dilay.Sawirle: Erik Mårtensson/Scanpix.
Gabadh 19-jir ah ee habeennimadii isniinta qudha looga jaray magaalada Landskrona ayaa horay gacan-fidin uga raadsatay urur lagu magacaabo "Tänk om - intii aadan falin ka fiirso" laantiisa Malmö. Ururka ayay howlihiisu ka mid yihiin dembiyada la xiriira sharf-dhaca, sida uu ururku ku qoray boggiisa internetka.
Newroz Ötunc, gudoomiyaha ururka "Tänk Om" ayaa dhaleecooyin dhowr ah isaga oo u marinaya saxaafadda dhaleeceeyay laanta bulshada ee maamulka degmada Landskrona. Ururka ayaa ku dhaleeceeynaya maamulka degmada in aan fiiro gaar ah loo yeelan khatarta gabadha 19-jirka ahi ku sugneeyd, islamarkaana aaney ka kaxeeyn oo aaney u wareejin degmo kale.
- Khatarta gabadha ayaan u bayaaniney hase yeeshee ey dhagaha ka fureeysteen. Waana mid aan aad uga tiiraanyaysnahay, sida ay Ötunc u sheegtay war-geeyska Helsingborgs Dagblad ee ka soo baxa magaalada Landskrona.